Maoritania.:Tsy fahaizana sa fanajana ny fomba amam-panao ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2007 0:46 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, Français, Ελληνικά, English
Ny atao hoe “tsara sy meva”dia arakarak’izay maso mijery: Ny vehivavy nofosana sy matavy dia maro mankafia eto Maoritania; araka ny maha-nofosana azy no hilazana azy hoe “manja”.Ny olona vaventy dia heverina ho mpanankarena .Noho izany ,misy tokoa ireo izay mampiasa fomba tsy marim-pototra mba ho manja kokoa araka ny heviny na koa hiseho ho manan-karena: ny fanatavezan sesi-mototra toy ny fanerena ny vehivavy hitelina couscous roa kilao miaraka amini’ny dibera 2 vera, indray homana.
Ny fanatavezana ny maoritanianina vavy no nahatonga ny lahatsoratry i Naomed (Politique au Sénégal) izay novalin’ny mpamaky iray hoe: “tsy azo omen-tsiny ry zareo satria izany no fomba nanabeazana azy”
Nanontany tena ary Naomed (Archiblog) hoe ny tsy fahaizana sy ny fomba amam-panao dia ampy hanome rariny an’izy ireo.
Ny fanao tsy mendrika dia maro tokoa eo amion’ny fianantsika ary ny fomba entim-paharazana no entina iarovana an’izany. Ohatra: ny tsindry hazo lena sy ny fanararaotana ny mpanampy an-trano sy ny fanandevozana ireo mpianatra kely (talibe), ny “excision”, ny fanambadiana ankaterena diso tanora loatra. Tafaletika lalina amin’ny fombantsika izany ary mifanojo tanteraka amin’ny fanao entim-paharazana, toy izany koa ny kolikoly, ny didi-jadona ny fanodikodinam-pahefana izay anaty ny fomba nentim-paharazana.
Na ekena aza fa tsy tompon’andraikitra amin’ny fanabezana voarainy izy ireo, hatra’aiza koa no tokony anekena izany ho fiarovan-tena amin’ny eloka tontosa. Tantitsika tokoa ny fanohizana ny fomba eloka be vava raha toa ka eo anivon’nty tanintsika sy raha toa ka olona iray fiaviana amintsika.
Dia hoy ihany I Named: raha fanao tsy mendrika no arovany ny fomba nentim-paharazana sy ny fanabeazana, rariny izany raha ampiarina eraky ny tontolo iainana. Izay soa ho antsika dia tokony ho soa ho any rehetra ho sarotra amintsika izany ny hitsara ny fanandevozana sy famarotana olona izay nampiarina tamin’I Afrika. Ny fanandevozana dia fomba mafy orina taloha. Maro tokoa ny fokonolona niorina tamin’izany amin’ny tany Afrikana, ka mifanaraka amin’ny fomba amam-panao tamin’izany fotoana izany. Ny faran-tenin’I Naomed dia ny fanoherana ny fomba fampiasana ny mpanampy an-trano, izay toy ny fanandevozana tokoa ary asehony ny tsy maha-maripototra ny fiarovana izany nentim-paharazana
Tsy misy amela ny elokin’ireo nanantanteraka izany fanandevozana izany: azo leferina ve ny fanararaotana misarisary fanandevozana ampiarina amin’ny talibe kely sy mpanampy an-trano satria hoe “noho ny fanabeazana taloha sy ny nentim-paharazana izay mbola tsy hita izay maharatsy azy”